ရေရှည်လက်တွဲတွေ ခိုင်ခိုင်မြဲမယ့် ချစ်ခြင်းတရားဆိုတာ...
ရေရှည်လက်တွဲတွေ ခိုင်ခိုင်မြဲမယ့် ချစ်ခြင်းတရားဆိုတာ…
22 Jun 2018 . 4:54 PM
အခရာရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေအားလုံး ကိုယ်တကယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ ဘဝမှာ ဆုံတွေ့ခဲ့ကြဖူးပြီလား? ချစ်သူသက်တမ်းကို အချိန်တော်တော်ကြာ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြပြီး ဆိုးတူကောင်းဖက် ဘဝအနိမ့်အမြင့်တွေထဲ ရုန်းကန်ကြဖူးပြီးပြီလား။ ကိုယ်တစ်ကယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့တာတောင် နားလည်မှုတွေ၊ အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတွေ မတည်မြဲမှာစိုးလို့ တစ်ချိန်ချိန် ကွေကွင်းရမှာ စိုးရိမ်ပူပန်နေရတာမျိုးတွေ ကြုံလာရပြီဆိုရင်တော့ ဒီလူတစ်ယောက်အပေါ် ကိုယ့်စိတ်ထဲက နက်နက်နဲနဲ အတည်တကျ ရည်စူးထားပြီးပြီဆိုတာ အခိုင်အမာဖြစ်နေပါပြီ။
ဒါပေမယ့် လက်ခုပ်ဆိုတာ တစ်ဖက်တည်းတီးတိုင်းမြည်တာမဟုတ်သလို ကိုယ့်ဘက်ကတစ်ဖက်တည်း ကောင်းအောင်၊ ရေရှည်အချစ်မြဲအောင် ကြိုးစားဖို့မဖြစ်နိုင်သးပါဘူး။ ကိုယ်ခုတွဲနေတဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ လက်အစုံဟာ တစ်ဘဝလုံး ကိုယ့်အပေါ် မြဲမြဲဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်ဖို့ တစ်နည်းပြောရရင် Relationship တစ်ခု တစ်သက်တာခိုင်မာဖို့ ၂ဦး၂ဖက် တည်ဆောက်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးပါ။
ခုဒီစာလေးကို ဖတ်နေရင်းနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်ဘဝရဲ့လက်တွဲဖော်ကို မြင်ယောင်လာရင်၊ သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေရှည်လက်တွဲသွားချင်စိတ်တွေ အဆုံးရှုံးမခံနိုင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ ဒီအချက်လေးတွေကို ဖတ်ရင်း ၂ဦး၂ဘက် တူတူမျှဝေကျင့်သုံးကြည့်ကြရအောင်။
(၁) ချစ်သူတွေသာမဟုတ် သူငယ်ချင်းပါဖြစ်ပါစေ။
စစ်တမ်းတွေတော်တော်များများအရဆိုရင်တော့ အချိန်အကြာဆုံး တည်မြဲသွားကြတဲ့စုံတွဲတွေဆိုတာ သူငယ်ချင်းလိုလည်း ပေါင်းသင်းလို့ရလို့ပါပဲ။ နှစ်တွေကြာလာလေလေ ၂ဦးကြားမှာ လျို့ဝှက်ချက်တွေပါးလျလာပြီး တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက် ထဲထဲဝင်ဝင်သိလာကြတာတွေ၊ ပိုမိုရင်းနှီးတဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောဆိုရင်ဖွင့်လို့ရတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကြောင့် ဘေးလူတွေအမြင်မှာတောင်သူငယ်ချင်းတွေလို့ထင်မြင်လာစေမိတဲ့အထိ ပွင့်လင်းလာနိုင်လေ ကောင်းလေပါပဲ။ ချစ်သူရည်းစားအရမ်းဆန်လွန်းပြီး ကိုယ့်အားနည်းချက်တစ်ခုခုပေါ်လို့ သူအထင်သေးသွားမှာစိုးရိမ်နေရတာတွေက ရေရှည်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
(၂) သီးခြားရှင်သန်မှုတွေရှိတာ သတိရပါ။
ဘယ်လောက်ပဲ အရာရာရင်ဖွင့်ဝေမျှကြတဲ့ အရင်းနှီးဆုံးဆက်ဆံရေးဖြစ်နေပါစေ လူတိုင်းမှာ သီးခြားရပ်တည်မှုနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှင်သန်နေထိုင်ရတဲ့ ဘဝတွေရှိပြီးသားပါ။ ဥပမာ လုပ်ငန်းခွင်မတူတာမျိုး၊ နေထိုင်တဲ့နေရာဝေးနေတာမျိုးတွေ၊ ဝါသနာနဲ့ အလေ့အထမတူတာမျိုးတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အဲ့လိုမတူညီမှုတွေကို အတင်းညှိယူဖို့မကြိုးစားဘဲ နားလည်ပြီး သူ့အတွက် ကိုယ့်အတွက် သီးသန့်ရှင်သန်မှုစက်ဝန်းလေး ဖန်တီးပေးပါ။ လူတိုင်းဟာ သူ့ဘဝစက်ဝန်းနဲ့သူ ရှင်သန်ရတာအသားကျပြီးသားမို့ပါ။
(၃) အရေးကြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာ ပါဝင်အကြံပေးပါ။
ကိုယ့်လက်တွဲဖော်နဲ့ အရာရာတိုင်း သဘောထားထပ်တူညီဖို့ဆိုတာ မလွယ်တဲ့အရာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘဝအတွက်၊ အလုပ်ခွင်နဲ့ အရေးပါတဲ့ကိစ္စတွေအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အရေးကြီးဆုံးသူဆီက အကြံဉာဏ်ကိုမျှော်လင့်တတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာတော့ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်အောင် စိတ်ပါဝင်စားနဲ့ တူတူဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ ပါဝင်ပေးဖို့ အသင့်ရှိနေပါစေ။
(၄) ငြင်းခုန်မှုရန်ပွဲတိုင်းဟာ ဝေးကွာစေမယ့် အကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါ။
ဒီလိုပြောရတာ တမျိုးတော့ဖြစ်ပေမယ့် ပုံမှန်အေးအေးဆေးဆေးဖြတ်သန်းနေကြတဲ့ RS တွေထက်စာရင် ရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက် RS တွေက အခက်အခဲတွေကြားက တည်ဆောက်ခဲ့ရတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေကို ပိုခံစားတတ်ပြီး အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲ ရေရှည် RS တစ်ခုကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးမခံဘဲ တည်ဆောက်သွားကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်း နီးပါး ငြင်းခုန်ရန်ဖြစ်နေပြန်ရင်လည်း သဘောထားမတူတော့တဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ ရှေ့ဆက်ဖို့ ယုံကြည်ချက်တွေ ဝေဝါးလာနိုင်ပါသေးတယ်။ ရန်တွေလည်းလျှော့ဖြစ်ရင်း ချစ်ခြင်းတွေလည်း ညှိယူကြပါ။
(၅) တစ်ယောက်က တစ်ယောက်ရဲ့ အားဖြစ်ပါစေ။
ကျရှုံးချိန်တိုင်း မှီခိုရတဲ့ ပခုံးတစ်ဖက်ဟာ အောင်မြင်ချိန် ဂုဏ်ပြုပေးမယ့် လက်ခုပ်တစ်စုံထက် ပိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်။ ကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့သူသာမှန်ရင် သူ့ရဲ့ အောင်မြင်ခြင်း၊ ကျရှုံးခြင်းတွေတိုင်းမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ဝမ်းသာဝမ်းနည်းခံစားချက်ဝေမျှမှုတွေ၊ အကြံဉာဏ်တွေ၊ ခွန်အားတွေက ရေရှည်မှာ ကိုယ့်လက်ကို လက်တွဲမဖြုတ်စေတော့မယ့် အာမခံချက်တွေပါ။
(၆) ဆိုးရွားတဲ့နေ့တွေရှိနိုင်တာလည်း အမှတ်ရပါ။
မတူညီတဲ့ လူသား၂ယောက် ပေါင်းစည်းမှုရဲ့ အစ ချစ်ခြင်းမျှဝေဆဲကာလတွေမှာတောင် စိတ်ခံစားချက် ဒါမှမဟုတ် တခြားပြင်ပ ပယောဂ အနှောင့်အယှက်တွေကြောင့် အဆင်မပြေတဲ့နေ့ရက်တွေဆိုတာ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ ကိုယ်တစ်ကယ်ချစ်တဲ့ လက်တွဲမယ့်သူသာမှန်ရင် တဒင်္ဂ စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ ၂ဦးသားပိုနာကျင်ရအောင် စိတ်လိုက်မာန်ပါ မဆုံးဖြတ်ဖို့ပါပဲ။ လေပြည်နဲ့ မုန်တိုင်းဆိုတာ တစ်လှည့်ဆီမို့ပါ။
(၇) ကိုယ့်ဘဝဟာ သူနဲ့မှ သာယာလာတာပါ။
အချိန်ကအဆုံးအဖြတ်ပေးတတ်တဲ့ ချစ်ဇာတ်လမ်းတိုင်းဟာ မှန်ကန်တဲ့သူနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ တစ်ရက်ဆီတိုင်းက အဓိပ္ပာယ်ရှိလာတာမျိုးပါ။ သူနဲ့တွေ့ရဖို့ပျော်နေတတ်တာ၊ သူနဲ့တွေ့ရချိန်တွေဟာ စိတ်သက်တောင့်သက်သာနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖြစ်နေတာ၊ သူနဲ့မတွေ့တဲ့အချိန်တွေမှာလည်း တူတူရှိခဲ့တဲ့အချိန်တွေက ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ မှတ်မှတ်ရရဖြစ်နေတာမျိုးပါ။
(၈) အချိန်ကြာလာလေ တစ်သားတည်းဖြစ်လာလေလေ။
တကယ်ရေရှည်တည်တံ့မယ့် RS မျိုးဆိုတာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အဆုံးရှုံးမခံနိုင်လာတာမျိုးပါ။ သူ့အတွက် ကိုယ်ဖြစ်တည်လာသလို ကိုယ့်ရဲ့ရှင်သန်ရခြင်းဆိုတာဟာလည်း သူ့ကြောင့်ပဲဖြစ်လာတာမျိုးပါ။ နောက်ကွယ်ရာက စိတ်မချရခြင်းမျိုးတွေ၊ မင်္သကာမှုတွေလုံးဝမရှိပဲ မျက်မှောက်မျက်ကွယ်ယုံကြည်မှုတွေတည်မြဲလာတာမျိုးပါ။
(၉) သံသယတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးနိုင်ကြရမှာ။
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို ဆုံးရှုံးရမှာ ကြောက်တဲ့စိတ်က သံသယတွေ၊ စိတ်ပူပန်မှုတွေပိုမို ပွားများလာစေပြီး အဲ့ပူပန်မှုတွေကြောင့် ပြသာနာတွေဖြစ်လာတတ်ကြတာ ဓမ္မတာပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ့်စိတ်သူ့စိတ် ၂ဦးသားစိတ်ထဲက လိပ်ခဲတည်းလည်းဖြစ်နေတဲ့ သံသယတွေ၊ သဝန်တိုမှုတွေ၊ အထင်အမြင်လွဲမှုတွေကို ထိပ်တိုက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အပြန်အလှန် မေးမြန်းကြရင်း အဖြေရှာရမှာပါ။ ၂ဦးသားဘဝလမ်းမှာ သံသယဆိုတာ နက်နက်နဲနဲအထိနာစေမယ့် ဆူးခလုတ်တွေပါ။
(၁၀) အနာဂတ်အရေး တူတူတွေးကြတာ။
ကိုယ်တစ်ကယ်အလေးအနက်ထားတဲ့သူကို ပိုင်ဆိုင်ရပြီဆိုရင်တော့ ရှေ့ဆက်လျှောက်မယ့် အချစ်ခရီးလမ်းတွေဟာ အနာဂတ်အတွက် ရည်မှန်းချက်တွေ ဆန္ဒတွေနဲ့ ပြည့်နေကြတာမျိုးပါ။ နောင်ဘယ်နှနှစ်အတွင်း ဘယ်လိုအာမခံချက်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ ၂ဦးသားဘဝထူထောင်ဖို့တွေးနေတတ်ကြတာ ရေရှည်လက်တွဲမယ့် ချစ်သူတို့ရဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုပါ။
ဒီအချက်တွေထဲက ဘယ်အရာတွေကများ ကိုယ်တို့၂ယောက်နဲ့ ကိုက်ညီနေပြီလဲ။ ဘယ်အရာတွေပြုပြင်ဖို့လိုသေးလဲ။ ဘယ်အရာတွေကို နားလည်လာသလဲဆိုတာ သိသွားပြီဆို တသက်မခွဲ ရေရှည်လက်တွဲလို့ရမယ့် RS လေးဖြစ်အောင် အပြန်အလှန်ဖေးကူမရင်း ဘဝလမ်းတွေ တူတူလက်တွဲ လျှောက်ရင်း လှမ်းနိုင်ကြဖို့ အကြံကောင်းလေးပေးလိုက်ပါရစေ။
ရရှေညျလကျတှဲတှေ ခိုငျခိုငျမွဲမယျ့ ခဈြခွငျးတရားဆိုတာ…
အခရာရဲ့ စာဖတျပရိသတျတှအေားလုံး ကိုယျတကယျခဈြရတဲ့သူနဲ့ ဘဝမှာ ဆုံတှခေဲ့ကွဖူးပွီလား? ခဈြသူသကျတမျးကို အခြိနျတျောတျောကွာ ဖွတျသနျးခဲ့ကွပွီး ဆိုးတူကောငျးဖကျ ဘဝအနိမျ့အမွငျ့တှထေဲ ရုနျးကနျကွဖူးပွီးပွီလား။ ကိုယျတဈကယျခဈြရတဲ့သူနဲ့ ခဈြသူတှဖွေဈခဲ့တာတောငျ နားလညျမှုတှေ၊ အပွနျအလှနျယုံကွညျမှုတှေ မတညျမွဲမှာစိုးလို့ တဈခြိနျခြိနျ ကှကှေငျးရမှာ စိုးရိမျပူပနျနရေတာမြိုးတှေ ကွုံလာရပွီဆိုရငျတော့ ဒီလူတဈယောကျအပျေါ ကိုယျ့စိတျထဲက နကျနကျနဲနဲ အတညျတကြ ရညျစူးထားပွီးပွီဆိုတာ အခိုငျအမာဖွဈနပေါပွီ။
ဒါပမေယျ့ လကျခုပျဆိုတာ တဈဖကျတညျးတီးတိုငျးမွညျတာမဟုတျသလို ကိုယျ့ဘကျကတဈဖကျတညျး ကောငျးအောငျ၊ ရရှေညျအခဈြမွဲအောငျ ကွိုးစားဖို့မဖွဈနိုငျသးပါဘူး။ ကိုယျခုတှဲနတေဲ့ ကိုယျ့ခဈြသူရဲ့ လကျအစုံဟာ တဈဘဝလုံး ကိုယျ့အပျေါ မွဲမွဲဆုပျကိုငျထားနိုငျဖို့ တဈနညျးပွောရရငျ Relationship တဈခု တဈသကျတာခိုငျမာဖို့ ၂ဦး၂ဖကျ တညျဆောကျရမယျ့အရာတှအေမြားကွီးပါ။
ခုဒီစာလေးကို ဖတျနရေငျးနဲ့ ကိုယျ့စိတျထဲမှာ ကိုယျ့ဘဝရဲ့လကျတှဲဖျောကို မွငျယောငျလာရငျ၊ သူနဲ့ ပတျသကျပွီး ရရှေညျလကျတှဲသှားခငျြစိတျတှေ အဆုံးရှုံးမခံနိုငျတဲ့စိတျတှပေျေါလာပွီဆိုရငျတော့ ဒီအခကျြလေးတှကေို ဖတျရငျး ၂ဦး၂ဘကျ တူတူမြှဝကေငျြ့သုံးကွညျ့ကွရအောငျ။
(၁) ခဈြသူတှသောမဟုတျ သူငယျခငျြးပါဖွဈပါစေ။
စဈတမျးတှတေျောတျောမြားမြားအရဆိုရငျတော့ အခြိနျအကွာဆုံး တညျမွဲသှားကွတဲ့စုံတှဲတှဆေိုတာ သူငယျခငျြးလိုလညျး ပေါငျးသငျးလို့ရလို့ပါပဲ။ နှဈတှကွောလာလလေေ ၂ဦးကွားမှာ လြို့ဝှကျခကျြတှပေါးလလြာပွီး တဈယောကျအကွောငျးတဈယောကျ ထဲထဲဝငျဝငျသိလာကွတာတှေ၊ ပိုမိုရငျးနှီးတဲ့ လှတျလှတျလပျလပျပွောဆိုရငျဖှငျ့လို့ရတဲ့ဆကျဆံရေးတှကွေောငျ့ ဘေးလူတှအေမွငျမှာတောငျသူငယျခငျြးတှလေို့ထငျမွငျလာစမေိတဲ့အထိ ပှငျ့လငျးလာနိုငျလေ ကောငျးလပေါပဲ။ ခဈြသူရညျးစားအရမျးဆနျလှနျးပွီး ကိုယျ့အားနညျးခကျြတဈခုခုပျေါလို့ သူအထငျသေးသှားမှာစိုးရိမျနရေတာတှကေ ရရှေညျအဆငျပွမှောမဟုတျပါဘူး။
(၂) သီးခွားရှငျသနျမှုတှရှေိတာ သတိရပါ။
ဘယျလောကျပဲ အရာရာရငျဖှငျ့ဝမြှေကွတဲ့ အရငျးနှီးဆုံးဆကျဆံရေးဖွဈနပေါစေ လူတိုငျးမှာ သီးခွားရပျတညျမှုနဲ့ ကိုယျ့ဟာကိုယျရှငျသနျနထေိုငျရတဲ့ ဘဝတှရှေိပွီးသားပါ။ ဥပမာ လုပျငနျးခှငျမတူတာမြိုး၊ နထေိုငျတဲ့နရောဝေးနတောမြိုးတှေ၊ ဝါသနာနဲ့ အလအေ့ထမတူတာမြိုးတှေ ရှိနတေတျပါတယျ။ အဲ့လိုမတူညီမှုတှကေို အတငျးညှိယူဖို့မကွိုးစားဘဲ နားလညျပွီး သူ့အတှကျ ကိုယျ့အတှကျ သီးသနျ့ရှငျသနျမှုစကျဝနျးလေး ဖနျတီးပေးပါ။ လူတိုငျးဟာ သူ့ဘဝစကျဝနျးနဲ့သူ ရှငျသနျရတာအသားကပြွီးသားမို့ပါ။
(၃) အရေးကွီးဆုံးဖွတျခကျြတှမှော ပါဝငျအကွံပေးပါ။
ကိုယျ့လကျတှဲဖျောနဲ့ အရာရာတိုငျး သဘောထားထပျတူညီဖို့ဆိုတာ မလှယျတဲ့အရာပါ။ ဒါပမေယျ့ ဘဝအတှကျ၊ အလုပျခှငျနဲ့ အရေးပါတဲ့ကိစ်စတှအေတှကျ ဆုံးဖွတျခကျြတှခေရြတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယျ့ရဲ့ အရေးကွီးဆုံးသူဆီက အကွံဉာဏျကိုမြှျောလငျ့တတျကွပါတယျ။ အဲ့ဒီအခါမြိုးမှာတော့ ကိုယျ့လကျတှဲဖျောရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြတှကေို အသငျ့တျောဆုံးဖွဈအောငျ စိတျပါဝငျစားနဲ့ တူတူဆုံးဖွတျပေးဖို့ ပါဝငျပေးဖို့ အသငျ့ရှိနပေါစေ။
(၄) ငွငျးခုနျမှုရနျပှဲတိုငျးဟာ ဝေးကှာစမေယျ့ အကွောငျးရငျးမဟုတျပါ။
ဒီလိုပွောရတာ တမြိုးတော့ဖွဈပမေယျ့ ပုံမှနျအေးအေးဆေးဆေးဖွတျသနျးနကွေတဲ့ RS တှထေကျစာရငျ ရနျဖွဈလိုကျပွနျခဈြလိုကျ RS တှကေ အခကျအခဲတှကွေားက တညျဆောကျခဲ့ရတဲ့ ခဈြခွငျးတှကေို ပိုခံစားတတျပွီး အဲ့ဒီစိတျနဲ့ပဲ ရရှေညျ RS တဈခုကို လကျလှတျဆုံးရှုံးမခံဘဲ တညျဆောကျသှားကွတာပါ။ ဒါပမေယျ့ အမွဲတမျး နီးပါး ငွငျးခုနျရနျဖွဈနပွေနျရငျလညျး သဘောထားမတူတော့တဲ့ ခံစားခကျြတှနေဲ့ ရှဆေ့ကျဖို့ ယုံကွညျခကျြတှေ ဝဝေါးလာနိုငျပါသေးတယျ။ ရနျတှလေညျးလြှော့ဖွဈရငျး ခဈြခွငျးတှလေညျး ညှိယူကွပါ။
(၅) တဈယောကျက တဈယောကျရဲ့ အားဖွဈပါစေ။
ကရြှုံးခြိနျတိုငျး မှီခိုရတဲ့ ပခုံးတဈဖကျဟာ အောငျမွငျခြိနျ ဂုဏျပွုပေးမယျ့ လကျခုပျတဈစုံထကျ ပိုခှနျအားဖွဈစပေါတယျ။ ကိုယျတကယျခဈြတဲ့သူသာမှနျရငျ သူ့ရဲ့ အောငျမွငျခွငျး၊ ကရြှုံးခွငျးတှတေိုငျးမှာ ကိုယျ့ရဲ့ ဝမျးသာဝမျးနညျးခံစားခကျြဝမြှေမှုတှေ၊ အကွံဉာဏျတှေ၊ ခှနျအားတှကေ ရရှေညျမှာ ကိုယျ့လကျကို လကျတှဲမဖွုတျစတေော့မယျ့ အာမခံခကျြတှပေါ။
(၆) ဆိုးရှားတဲ့နတှေ့ရှေိနိုငျတာလညျး အမှတျရပါ။
မတူညီတဲ့ လူသား၂ယောကျ ပေါငျးစညျးမှုရဲ့ အစ ခဈြခွငျးမြှဝဆေဲကာလတှမှောတောငျ စိတျခံစားခကျြ ဒါမှမဟုတျ တခွားပွငျပ ပယောဂ အနှောငျ့အယှကျတှကွေောငျ့ အဆငျမပွတေဲ့နရေ့ကျတှဆေိုတာ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ ကိုယျတဈကယျခဈြတဲ့ လကျတှဲမယျ့သူသာမှနျရငျ တဒင်ျဂ စိတျခံစားခကျြတှနေဲ့ ၂ဦးသားပိုနာကငျြရအောငျ စိတျလိုကျမာနျပါ မဆုံးဖွတျဖို့ပါပဲ။ လပွေညျနဲ့ မုနျတိုငျးဆိုတာ တဈလှညျ့ဆီမို့ပါ။
(၇) ကိုယျ့ဘဝဟာ သူနဲ့မှ သာယာလာတာပါ။
အခြိနျကအဆုံးအဖွတျပေးတတျတဲ့ ခဈြဇာတျလမျးတိုငျးဟာ မှနျကနျတဲ့သူနဲ့ တှတေဲ့အခါ တဈရကျဆီတိုငျးက အဓိပ်ပာယျရှိလာတာမြိုးပါ။ သူနဲ့တှရေ့ဖို့ပြျောနတေတျတာ၊ သူနဲ့တှရေ့ခြိနျတှဟော စိတျသကျတောငျ့သကျသာနဲ့ လှတျလှတျလပျလပျ ဖွဈနတော၊ သူနဲ့မတှတေဲ့အခြိနျတှမှောလညျး တူတူရှိခဲ့တဲ့အခြိနျတှကေ ကိုယျ့စိတျထဲမှာ မှတျမှတျရရဖွဈနတောမြိုးပါ။
(၈) အခြိနျကွာလာလေ တဈသားတညျးဖွဈလာလလေေ။
တကယျရရှေညျတညျတံ့မယျ့ RS မြိုးဆိုတာ အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ အဆုံးရှုံးမခံနိုငျလာတာမြိုးပါ။ သူ့အတှကျ ကိုယျဖွဈတညျလာသလို ကိုယျ့ရဲ့ရှငျသနျရခွငျးဆိုတာဟာလညျး သူ့ကွောငျ့ပဲဖွဈလာတာမြိုးပါ။ နောကျကှယျရာက စိတျမခရြခွငျးမြိုးတှေ၊ မင်ျသကာမှုတှလေုံးဝမရှိပဲ မကျြမှောကျမကျြကှယျယုံကွညျမှုတှတေညျမွဲလာတာမြိုးပါ။
(၉) သံသယတှအေကွောငျး ဆှေးနှေးနိုငျကွရမှာ။
အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ ကိုယျခဈြတဲ့သူကို ဆုံးရှုံးရမှာ ကွောကျတဲ့စိတျက သံသယတှေ၊ စိတျပူပနျမှုတှပေိုမို ပှားမြားလာစပွေီး အဲ့ပူပနျမှုတှကွေောငျ့ ပွသာနာတှဖွေဈလာတတျကွတာ ဓမ်မတာပါ။ အကောငျးဆုံးကတော့ ကိုယျ့စိတျသူ့စိတျ ၂ဦးသားစိတျထဲက လိပျခဲတညျးလညျးဖွဈနတေဲ့ သံသယတှေ၊ သဝနျတိုမှုတှေ၊ အထငျအမွငျလှဲမှုတှကေို ထိပျတိုကျ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး အပွနျအလှနျ မေးမွနျးကွရငျး အဖွရှောရမှာပါ။ ၂ဦးသားဘဝလမျးမှာ သံသယဆိုတာ နကျနကျနဲနဲအထိနာစမေယျ့ ဆူးခလုတျတှပေါ။
(၁၀) အနာဂတျအရေး တူတူတှေးကွတာ။
ကိုယျတဈကယျအလေးအနကျထားတဲ့သူကို ပိုငျဆိုငျရပွီဆိုရငျတော့ ရှဆေ့ကျလြှောကျမယျ့ အခဈြခရီးလမျးတှဟော အနာဂတျအတှကျ ရညျမှနျးခကျြတှေ ဆန်ဒတှနေဲ့ ပွညျ့နကွေတာမြိုးပါ။ နောငျဘယျနှနှဈအတှငျး ဘယျလိုအာမခံခကျြ၊ ပိုငျဆိုငျမှုတှနေဲ့ ၂ဦးသားဘဝထူထောငျဖို့တှေးနတေတျကွတာ ရရှေညျလကျတှဲမယျ့ ခဈြသူတို့ရဲ့ သင်ျကတေတဈခုပါ။
ဒီအခကျြတှထေဲက ဘယျအရာတှကေမြား ကိုယျတို့၂ယောကျနဲ့ ကိုကျညီနပွေီလဲ။ ဘယျအရာတှပွေုပွငျဖို့လိုသေးလဲ။ ဘယျအရာတှကေို နားလညျလာသလဲဆိုတာ သိသှားပွီဆို တသကျမခှဲ ရရှေညျလကျတှဲလို့ရမယျ့ RS လေးဖွဈအောငျ အပွနျအလှနျဖေးကူမရငျး ဘဝလမျးတှေ တူတူလကျတှဲ လြှောကျရငျး လှမျးနိုငျကွဖို့ အကွံကောငျးလေးပေးလိုကျပါရစေ။